Fiangonana zandriny - Wikipedia
Ny fiangonana zandriny dia ireo fiangonana kristiana izay nipoitra avy amin'ireo fiangonana protestanta na tamin'ny fikambanana kristiana nisy teo aloha noho ny tsy fitoviam-pomba fandray ny Baiboly na ny antony hafa.
Isan'ireo lazaina matetika hoe zandriny ny Pentekotista Mitambatra, ny Jesosy Famonjena, ny Assemblée de Dieu, ny Vavolombelon'i Jehovah, ny Fiangonana Adventista, ny Fiangonan'i Jesoa Kristy ho an'ny Olomasin'ny Andro Farany.
Raha ny eto Madagasikara, ireo fiangonana ireo dia tsy isan'ireo lazaina na milaza tena hoe "fiangonan-dehibe" na "fiangonana ara-tantara", na "fiangonana mitana ny mahazatra" na "fiangonana zokiny" toy ny Fiangonana Loterana Malagasy, ny Eglizy Katolika Romana, ny Fiangonan'i Jesoa Kristy eto Madagasikara, ny Eklesia Episkopaly Malagasy, ny Fiangonana Ortodoksa sy ny sisa.
Eto Madagasikara ihany no mampiasa io andian-teny hoe "fiangonana zandriny" io ka tsy tena mazava tsara ny famaritana mety homen'ny olona io teny io. Noho izany dia maro ireo fiangonana tsy manaiky ny hosokajina ho zandriny.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Fiangonana_zandriny&oldid=998094"
Dernière modification le 12 Oktobra 2020, à 11:31
Voaova farany tamin'ny 12 Oktobra 2020 amin'ny 11:31 ity pejy ity.